माधव नेपाल समूहलाई ६ मन्त्रालय, को को हुँदैछन् मन्त्री ? – Kavrepati
Home / राजनिति / माधव नेपाल समूहलाई ६ मन्त्रालय, को को हुँदैछन् मन्त्री ?
admin July 20, 2021	राजनिति Leaveacomment 192 Views
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह पनि सरकारमा जाने भएको छ । नेपाल समुहले ६ मन्त्रालयमा माग गरेको छ । तर धेरै दल सहभागी हुने सरकारमा मन्त्रालयको टुंगो भने लागेको छैन । एउटै पार्टीका फरक समुह भएका कारण देउवालाई मन्त्रालयको भाग लगाउन निकै समस्या परेको छ ।
Previous ओलीको चलाखी ! सर्वोच्चको फैसलाले पनि अब माधव नेपाललाई गरेको कारवाही रोक्न सक्दैन, स्पष्टिकरणपत्रमा यस्तो लेखियो
Next माधव नेपाललाई राखे महेश वस्नेतले यस्तो प्रस्ताव, अब हामी तपाईको पुत्ला जलाउँदैनौं